Uvimba we-usd / chf
Udidi: Usd / chf
I-USDCHF ibuyisela umva i-Advance yeentsuku ezimbini kunye ne-Retreats ukusuka ku-Mid 0.9300
Ukuhlaziywa: 23 Novemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-23 kaNovemba
Isibini se-USDCHF sidibanisa iinzuzo zamva nje ngaphezulu kwe-0.9300, emva kweentsuku ezimbini zeenzuzo ezityhalele phezulu kwinyanga engaphambili. Esi sibini siphakame saya kutsho phakathi kwe-0.9300 ngenxa yobuthathaka Swiss franc kunye nedola yaseMelika eyomeleleyo kodwa ke yawela kwindawo ephantsi ye-0.9301 ye-intraday, ukucima iinzuzo zosuku.
Amanqanaba okumelana: 0.9575, 0.9472, 0.9375
Amanqanaba enkxaso: 0.9300, 0.9275, 0.9225
I-USDCHF yexesha elide iTrend: Ukulinganisa
Isibini se-USDCHF sisebenzise i-intraday uptick ukuthengisa phezulu, ukufikelela kwi-intraday highs ye-0.9344. Okwangoku, ukuhla ukusuka apha kuya kuthathwa njengenye inqanaba lomzila ukusuka kwinqanaba le-0.9472 (eliphezulu) lika-Matshi 2021 kwimbono enkulu.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba i-USDCHF iphula ngaphezu kwe-0.9350, i-browser yangoku ye-bullish ingaqhubeka, ngeso kwizinga eliphezulu lokumelana ne-horizontal kwi-0.9472. Okwangoku, nayiphi na inzame yokubuyela kumyinge ohambahambayo we-13 breakpoints kwi-0.9300 inokuthathwa njengethuba lokuthengisa.
I-USDCHF yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
Nangona i-retreat, i-USDCHF ikhefu ye-0.9300 yokuchasana ngaphezu kwe-Okthobha ephezulu ye-0.9337 ithetha ukuba ukunyuka kunokuqhubeka. I-Intraday bias isekhona. Ikhefu lingavula indlela eya kwinqanaba eliqikelelweyo lexesha elifutshane le-0.9400.
Ukuthetha ukuchithwa kwexesha elifutshane, ukuphulwa kwe-0.9350 ukuchasana kwexesha elisondeleyo kuyimfuneko kwi-upside. Ngaphandle kokuchacha okulindelekileyo, umkhwa okufutshane uhlala udakumbile. Ngenxa yokungabikho kwamanqanaba amakhulu enkxaso okwethutyana, ukuwohloka ngakumbi phantsi kwenqanaba le-0.9300 kunokwenzeka.
tags Uhlalutyo Technical, USDCHF
I-USDCHF Yandisa Ukwehla Ngaphantsi kwe-0.9150, US 10-Year Treasury Yields Falls
Ukuhlaziywa: 9 Novemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-9 kaNovemba
I-USDCHF yandisa isantya sayo esibi ngexesha leseshoni yanamhlanje, yehla ngaphantsi kwe-5 kunye ne-avareji ehambayo (MAs). Emva kwexesha elifutshane lokuxabisa ixabiso, isibini siye sathoba ulindelo lwenkqubela phambili eqhubekayo. NgoLwesibini, i Isivuno se-US seminyaka eyi-10 kaNondyebo iwele kumazantsi amatsha eeveki ezininzi, inxalenye yentshukumo ebanzi yethemba kulo lonke igophe lesivuno sase-US.
Amanqanaba okumelana: 0.9250, 0.9200, 0.9150
Amanqanaba enkxaso: 0.9100, 0.9050, 0.9000
Nangona i-USDCHF iphakama ukusuka kwi-0.9088 ephantsi ukuya kumanqanaba e-0.9175 kwi-Nov. 5 ephezulu, ukwehla okungahambi kakuhle okulandelayo ngaphantsi kwe-0.9150 ngexesha elisondeleyo kwi-0.9100 ngenxa yobuthakathaka bedola jikelele. Ukuhla kuqale kwakhona, kwaye i-lows entsha engaphantsi kwe-0.9100 inokwenzeka. I-pair ye-USDCHF inokuhamba ngaphantsi kwe-0.9100 kwiseshoni elandelayo.
Ukuhla kwi-0.9368 kuthathwa njengesigaba sesithathu somjikelezo we-0.9472, kungekho zibonakaliso ezibonakalayo zokugqitywa okwangoku. Ukwaphulwa okuqinileyo kwinqanaba lokumelana ne-0.9150, ngakolunye uhlangothi, kuya kuba sisilumkiso sokuqala sokuguqulwa kwendlela, ukutsala ingqalelo kwinqanaba elibalulekileyo lokumelana ne-0.9200 yovavanyo.
I-USDCHF yeXesha elifutshane leNdlela: Thwala
Iimpawu zexesha elifutshane, ezifana ne-RSI, ehamba ngaphantsi kwe-50, kunye ne-avareji ehambayo ye-5 kunye ne-13, ejikelezayo ngaphezu kwexabiso, ixhasa ukujonga okungalunganga kunye nokuhla kwexabiso langoku. Ngenxa yoko, nakuphi na ukunyuka okulandelayo ngaphaya kwemiyinge ehambayo kunye nenqanaba le-0.9150 ngokuqinisekileyo liya kujongwa njengethuba lokuthenga.
Iibhere ze-USDCHF zinokujolisa kwinqanaba le-0.9080 ukuba imarike iphula phantsi kwenkxaso yayo ye-0.9101. Ukuhla okunye ukusuka kweli nqanaba kunokunyusa uxinzelelo lokuthengisa, okubangela ukuba ixabiso livavanye inqanaba le-0.9050. Ukwaphula lo mqobo kunokukhokelela kwinqanaba le-0.9000, ukuqinisa isantya esibi sesibini.
I-USDCHF iRetreats ukusuka kwi-0.9226 Njengoko iinkunzi zeNkunzi zijonge uQinisekiso ngaPhaya kweMimandla ePhambili
Ukuhlaziywa: 26 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Okthobha 26
Ngexesha leeyure zokurhweba ngoLwesibini, i-USDCHF idibanisa iinzuzo. Emva kokufumana inzuzo ekhangayo yeepips ezingaphezu kwe-40 kwiseshoni yase-US, isibini sibuyela kwi-intraday highs malunga nenqanaba le-0.9226. I-USDCHF currency pair ngoku ithengisa ngaphantsi kwe-0.9200 njengoko abathengi befuna isiqinisekiso ngaphandle indawo engundoqo yetshathi yemihla ngemihla.
Amanqanaba okumelana: 0.9472, 0.9375, 0.9250
Amanqanaba enkxaso: 0.9150, 0.9050, 0.8950
Ngomhla wangaphambili, i-USDCHF ifumene inkxaso kwi-0.9150 kwitshathi yemihla ngemihla, kwaye ukuba isibini sizama ukuphula ngaphantsi kwelo nqanaba, kunokukhokelela kuvavanyo lwamanqanaba aphantsi. Esi sibini sisadibanisa kuluhlu olulinganiselweyo lokurhweba phakathi kwe-0.9150 kunye ne-0.9250, apho bekuye kwiveki ephelileyo.
Ukuphumelela okuqhubekayo kwendawo yokumelana ne-0.9200, ngakolunye uhlangothi, kuya kubonisa ukubuya okuphezulu kwaye kubhekiselele kwinqanaba elibalulekileyo lokumelana ne-0.9250 yokuvavanya kwakhona. Ukwaphulwa okuqinileyo kwinqanaba lenkxaso ye-0.9175, nangona kunjalo, kuya kuba yinto ebonisa kwangaphambili ukuguqulwa kwendlela kunye nokutshintshela ingqalelo kwinqanaba le-0.9150 lokuqinisekisa.
I-USDCHF yeXesha elifutshane leNdlela: Ukulinganisa
Ngokuchasana kwi-0.9250, i-USDCHF isalindeleke ukuba iwele ngakumbi. Ukunyuka kwamva nje ukusuka kwi-0.9150 kuthathwa njengenye inqanaba lokuphindaphinda kwendlela. I-intraday trend is in the range with resistance at 0.9215. Ngaphandle koko, imeko yayo inokuhlala i-bullish xa kukho ukuphindaphinda okunamandla.
Kwi-0.9226 intraday high, ukuphulwa kunokusondela ekubuyiseleni ukusuka kwi-0.9250 ukuya kwi-0.9332. Ukuphulwa kwenqanaba elincinci lenkxaso ye-0.9175, ngakolunye uhlangothi, kuya kubangela ukuthembela okungalunganga kwinqanaba lenkxaso ye-0.9150. I-pair ye-USDCHF ibonakala inomdla ekunciphiseni ngakumbi kunye nomnqweno wokubuyela phantsi kwinqanaba le-0.9200 okwangoku.
Ukuwa kwe-USDCHF Apha ngezantsi kweNkxaso ebalulekileyo, iSilayidi seDola siyakhawulezisa
Ukuhlaziywa: 19 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Okthobha 19
NgoLwesibini, idola yaseMelika yehle kancinci ngokuchasene nefranc yaseSwitzerland. Aba babini bawela ezantsi ukuzinza ngezantsi kwe-0.9200 emva kokuchukumisa indawo ephezulu kwi-0.9242 kwiseshoni yase-US. Isibini semali ye-USDCHF sithengisa ngoku kwi-0.9225, yehla nge-0.15 yepesenti ngosuku. Njengoko izigqibo zabarhwebi zichaphazeleka kukungxengxeza kweFed kunye nokunyuka kwamaxhala, ukunyuka kwamaxabiso UNondyebo wase-US Izivuno zixhasa umdla wedola yaseMelika.
Amanqanaba okumelana: 0.9472, 0.9375, 0.9275
Amanqanaba enkxaso: 0.9175, 0.9100, 0.9018
Yonke imihla, i-USDCHF iye yandisa ubuthathaka bayo ngaphantsi komndilili we-5 kunye ne-13, ebonisa ukuba abathengisi banokubamba izintso ngokuqinileyo kwaye bajolise kwinqanaba lokuphinda libuyise u-0.9230 ngexesha lokuwa kwangoku.
Ummandla we-0.9175 yinkxaso yangoko, kwaye ikhefu elingaphantsi kwelo nqanaba liya kubhengeza inqanaba le-0.9150, elingummandla wenkxaso yeenyanga ezininzi ophantsi. Kwicala elingasentla, ukuxhathisa kwangoku kungoku kwi-0.9250, kulandele i-0.9275 kunye ne-0.9300.
I-USDCHF iboshwe ngamanqanaba kwi-0.9175 / 9275, kunye notyekelo lwe-intraday kwizinto ezimbi. Ukongezwa kwethontsi kusenokwenzeka ngenqanaba lokumelana no-0.9250. Ukwaphula inqanaba le-0.9175, kwelinye icala, kunokubangela ukuhla okungaphezulu.
Nangona kunjalo, xa unikwe imeko ye-bullish yokuhlangana kwi-4 yeyure ye-RSI, ukwaphulwa kwenqanaba le-0.9175 kunokuqinisekisa ukufakwa kwexesha elifutshane kunye nokubuyisela umva ukuya phezulu, ukuvumela ukubuyela kumgca wokumelana oxwesileyo (ngoku kwinqanaba le-0.9250) .
I-USDCHF izisa iDip-Ukuthenga kwi-0.9257 Ukulandela i-USD Demand
Ukuhlaziywa: 12 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Okthobha 12
Isibini se-USDCHF sifumene isilayidi sangaphakathi ukuya kwi-0.9257 kwaye sagqityelwa ukubonwa sihleli kwinqanaba elidlulileyo le-0.9300, kwindawo ephezulu yokuthengisa. Inkqubo ye- I-franc ekhuselekileyo yaseSwitzerland ichaphazeleke kukubuya okuhle kwixa elizayo le-US equities, ethathelwa ingqalelo njengeyona nto ibalulekileyo esebenza njengenkxaso kwisibini se-USDCHF.
Amanqanaba okumelana: 0.9547, 0.9472, 0.9375
Amanqanaba enkxaso: 0.9250, 0.9200, 0.9150
I-USDCHF Ixesha elide: Ukuhla
Ukusuka kumbono wobugcisa, isibini se-USDCHF saqhekeza ngenkxaso ethe tyaba ethe tye kufutshane ne-0.9275 kusuku olungaphambi kwalolo. Iimeko zokudibanisa, kwelinye icala, zinokunceda ukunciphisa umda, ubuncinci okwangoku, ngaphezulu kwenqanaba le-0.9300. Isaphulelo sesibini sinokunyuka ukuya kwinqanaba le-0.9332.
Kwelinye icala, ukuba i-USDCHF igcina ukutyhala kwayo ngaphezulu kwenqanaba le-0.9300, imeko yangoku yokuqhubela phambili inokuqhubeka, iliso kwinqanaba lokumelana ngokuthe tyaba ku-0.9375. Okwangoku, nayiphi na inzame yokubuyela kumndilili wokuhamba we-5 nowe-13 breakpoint in 0.9290 ingajongwa njengethuba lokuthengisa.
Utyekelo lwangaphakathi kwi-USDCHF luhlala lukwinqanaba lokuqala lomqobo we-0.9332. Inqanaba lokuxhathisa elichaziweyo le-0.9375 lokuqinisekisa kunokuba lula ulwaphulo oluphambili apha, njengophawu lwangaphambi kokubuyela umva ngokunyusa umgangatho.
Kwicala elisezantsi, kwinqanaba eliphantsi le-0.9275, icala eliphantsi ngoku likhethwa phantsi kwenqanaba lenkxaso encinci ye-0.9250. Emva kokurhweba ngaphezulu kwe-0.9275, idola yaseMelika ithathe ithoni yesicelo esikufutshane emva kokubetha amanqanaba angaphezu kwe-0.9300. Esi sibini sinokuqhubeka nokunyuka kwiseshoni elandelayo.
I-USDCHF ikufuphi ne-0.9300, ukunyuka kweDola ngokulandela ukuveliswa kwe-US T-Bond
Ukuhlaziywa: 5 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Okthobha 5
Emva kokuchacha kumgangatho ophantsi i-USDCHF ibuyela kumanqanaba akufutshane ne-0.9300 njengoko idola yaseMelika iphinde yafumana indawo elahlekileyo emva kweentsuku ezintathu zilandelelana ebomvu. Idola lizuze umhlaba xa kuthelekiswa nolona khuphiswano lwalo luphambili ngolwe-Lwesibini, ngenxa yokuphakama Unondyebo wase-US uvelisa kunye nomnqweno ofanelekileyo womngcipheko, kunye nethoni efanelekileyo kwiimarike ezinkulu zehlabathi.
Amanqanaba enkxaso: 0.9230, 0.9175, 0.9080
I-USDCHF ithengisa malunga ne-0.9300, phakathi kwe-avareji ehambayo ye-5 kunye ne-13, kwaye yagqitywa ukubonwa ithengisa kwi-0.9280, emva kokuphula inqanaba le-0.9275. Ukuba ixabiso liqala ukuhla, inkxaso elandelayo inokuba linqanaba elithe tyaba kwi-0.9175 ukuba intengiso iyaqhubeka nokwenza iindawo eziphakamileyo nezisezantsi.
Nangona kunjalo, ulwaphulo olukhulu lwenkxaso ye-0.9300 yajika inqanaba lokumelana inokuba luphawu lwangaphambili lokuhlehla kwendlela kunye nokutshintsha kugxilwe emva kubuyiselwe kwizithintelo eziphambili ze-0.9472 zokuqinisekisa. Iidiphu kufuneka zigcinwe kwindawo yenqanaba le-0.9200, ebekwe kufutshane nomqobo wokuxhasa oxwesileyo.
Ngeli xesha, i-USDCHF ye-intraday bias isakhula. Isaphulelo esivela kwi-0.9230 kufuneka sijolise kwi-0.9300. Okwangoku, ikhefu elizinzileyo apho liya kukhokelela ekubuyisweni kweepesenti ezingama-61.8 kwinqanaba le-0.9375. Kwicala elisezantsi, ikhefu le-0.9200 kwinqanaba eliphantsi liza kuphinda liqale kwakhona ukwehla okukhulu.
Ukuphuka kwenqanaba le-0.9230 elincinci lenkxaso kwicala eliphantsi kuya kwenza ukuba i-intraday bias ingathathi hlangothi kwaye izise ukudityaniswa kwasekuqaleni. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso liphula umda ongezantsi kwaye lihlala ngezantsi kwe-0.9200, imeko ye-bullish inokungasebenzi. Kule meko, isibini sinokuqhubeka sityibilika ukuya kumanqanaba e-0.9150.
Rally ye-USDJPY iyaqhubeka njengoko izuza i-Momentum engakumbi
Ukuhlaziywa: 30 Septemba 2021
Uhlalutyo lwe-USDJPY-Ixabiso liyaqhubeka ukuya kwiRally ePhambili njengoko uMandla usonyuka
I-rally ye-USDJPY iyaqhubeka njengoko isantya sokunyuka sonyuka. Abathengi bazuze esi sikhundla emva kokukhanyisa ikhandlela kufutshane ne-109.100 kwinqanaba eliphambili. Iinkunzi ke zonyusa uxinzelelo, kwaye intengiso iyaqhubeka nokunyuka phezulu. Ixabiso, nangona kunjalo, lisetelwe ukufikelela kwinqanaba elitsha ngaphambi kokuba kubuye umva. Njengoko ukunyuka kukwanda, amanqanaba amaxabiso amaninzi aphulwe. I-USDJPY ke iya kuseta phezulu phezulu phambi kokuba iibhere zibekwe.
Amanqanaba abalulekileyo e-USDJPY:
Inqanaba lokumelana: 111.200, 110.500
Inqanaba leNkxaso: 109.700, 109.100
I-USDJPY yexesha elide iTrend: Bullish
I-USDJPY iqala ngokunyuka okuphezulu ngaphambi kokungena kwinqanaba lokudityaniswa. Njengoko abathengi baqala ukufudukela phezulu, abathengisi balwa ukugcina amanqanaba amaxabiso azinzile. Njengoko ikhandlela le-bearish ligqumelele ukuphakama okuphezulu, intengiso iqale imeko ye-bearish. Nangona kunjalo, ixabiso langena kwindawo yokudityaniswa. Ngenxa yoko, i-USDJPY iyaqhubeka nokubamba phakathi kwamanqanaba aphambili aphambili ayi-110.59 kunye no-109.100.
Iinkunzi zithathe ulawulo lwentengiso njengoko amaxabiso eqhubeka nokubuyisa la manqanaba. Ixabiso, kwelinye icala, liyaqhubeka nokunyuka njengoko umfutho usakha. Amanqanaba amaninzi okuchasa kunye nenkxaso ayaphulwa. I-MACD (Ukuhambisa umndilili wokuDibana kunye nokuDibana) i-histogram kwitshathi yemihla ngemihla iyaqhubeka nokunyuka njengoko iinkunzi zeenkomo zifumana isantya. Xa imarike ifikelela kwindawo ephantsi, ixabiso liya kuqala ukuwa. Njengoko iinkunzi zeenkomo zigcina ulawulo lweemarike, umndilili ohambayo uwela phezulu.
I-USDJPY yeXesha eliFutshane leNdlela: Bullish
Kwitshathi ye-4hour, ixabiso lokuqala liqala ukuhamba kwindawo ephantsi ngaphambi kokuba abathengi bangene. Imakethi iqala ukwenza ukuphakama okuphezulu kunye nokuphakama, isaphula amanqanaba aphambili abalulekileyo. Umgangatho we-bearish ke ngoko uya kuseta emva kokuba ukukhwela kwe-bullish kuphelile. I-histogram ye-MACD iyaqhubeka nokwanda, kwaye iinkunzi zeenkomo zihlala zongeza uxinzelelo ngakumbi kwintengiso. Umndilili wokuhamba ukwasebenza njengomgca wenkxaso njengoko imarike iqhubeka nokuhlangana phezulu. I-USDJPY ke iya kuqhubeka nokukhwela kwayo ngaphambi kokuba iibhere zisete.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, Uhlalutyo Technical, USDJPY
I-USDCHF izuza kumhlaba wosuku lwe-2 kumqolo kwi-Wide USD Strength
Ukuhlaziywa: 28 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Septemba 28
Isibini se-USDCHF sithengisa ngaphezulu ngolwe-Lwesibini. Emva kokuthumela umfutho oqinisekileyo kwiseshoni yase-US, esi sibini sidibanisa inzuzo. Inkqubo ye- iUSD iqhubekile nokuxhamla ngokunyuka kwamaxabiso ebhondi e-US, asebenza njengomsila.
Amanqanaba enkxaso: 0.9242, 0.9175, 0.9080
Idola yaseMelika ihlala yomelele xa ithelekiswa nefranc yaseSwitzerland yosuku lwesibini ngokulandelelana, njengoko ukulungiswa kwangaphakathi kwemini kufumana abathengi kwi0.9275, ukusuka ku-0.9255. Ngengqondo ebanzi, ukwehla ukusuka kwi-0.9332 kuthathwa njengomjikelo wesithathu wokujikeleza ukusukela kwinqanaba le-0.9472 (ephezulu). Okwangoku, akukho nto ibonisa ukuba umjikelo uza kugqitywa.
Ukuqhubekeka, ekujolise kuko okulandelayo kuya kuba kukuqikelelwa kwepesenti ye-138.2 ukusuka kwi-0.9472 ukuya kwi-0.8926 ukusuka kwi-0.9274 ukuya kumanqanaba e-0.9018. Ukophulwa okunamandla kwenqanaba lokumelana ne-0.9332, nangona kunjalo, iya kuba luphawu lwangaphambili lokuguqula imeko kunye nokubuyisela ingqalelo kwinqanaba le-0.9472 eliphambili lokumisela ukungqinisisa.
Utyekelo lwangaphakathi kwi-USDCHF luhlala lukwinqanaba lokuqala lomqobo we-0.9300. Inqanaba lokuxhathisa elichaziweyo le-0.9332 lokuqinisekisa kunokuba lula ulwaphulo oluphambili apha, njengophawu lwangaphambi kokubuyela umva ngokunyusa umgangatho.
Kwicala elisezantsi, kwinqanaba eliphantsi le-0.9101, icala eliphantsi ngoku likhethwe phantsi kwenqanaba lenkxaso encinci ye-0.9200. Emva kokurhweba ngaphezulu kwe-0.9275, idola yaseMelika ithathe ithoni yexabiso elisondeleyo emva kokubetha amanqanaba angaphezu kwe-0.9300. Esi sibini sinokunyuka kwiseshoni elandelayo.
I-USD / CHF ikulungele ukugqiba ukulungiswa kwayo!
Ukuhlaziywa: 24 Septemba 2021
I-USD / CHF yayikwinqanaba lokulungisa kodwa isibini sifumene inkxaso eyomeleleyo kwaye ngoku silwa nzima sizama ukubuyisa. Stil, sidinga ukuqinisekiswa ngaphambi kokuthatha inyathelo, ngaphambi kokutsiba kwindawo ende.
I-USD ifumene uncedo kwisalathi esitsha seNtengiso yeKhaya esichazwe ku-740K ngaphezulu kwe-712K ekulindelweyo kwaye kuthelekiswa ne-708K kwixesha lokwenza ingxelo elidlulileyo. Ngokobuchwephesha, i-USD / CHF igcina i-bias ye-bullish ngaphandle kokubuyela umva nje.
Uhlalutyo lobuGcisa lweD USD / CHF!
Isibini se-USD / CHF sifumene inkxaso kwinqanaba leveki ye-S1 (0.9215). Njengoko ubona, isilele ukuhlala phantsi komgca wepligi ophezulu onyukayo (UML) owawubonwa njengenkxaso enamandla.
Ngoku, ibalekile emzimbeni wejelo elisezantsi kwaye izama ukuphuma nakwipateni encinci kanxantathu. Ukubhalisa ukuphuma okuqinisekileyo kwezi patheni kunokubonisa ukukhula okungaphaya. Ukudityaniswa kwethutyana ngaphezulu komgangatho ophezulu wamaMedian (UML) kunokutsala abathengi abaninzi.
Ukufuduka okwethutyana kubonakala ngathi kuphelile, ke i-USD / CHF inokujikela kwicala elingaphezulu. Okwangoku, kuphela kukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwe-0.9274 kunokubonisa ukukhula okuqinileyo.
tags CHF, ukuseta urhwebo, Ingcinga yokurhweba, iUSD, USD / CHF
I-USDCHF ibuya umva kwii-Highs ezikufutshane ne-0.9332 njenge-Swiss Franc Inzuzo
Ukuhlaziywa: 21 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Septemba 21
Kwiiyure zokuqala zaseYurophu ngoLwesibini, isibini se-USDCHF sithengisa. Esi sibini sehle ekulungiseni ukubuyela umva emva kokuchukumisa ukuphakama kwenyanga ngaphezulu kwe-0.9300. Okwangoku ithengisa nge-0.9248, yehla nge-0.32 yeepesenti ngosuku. Kwelinye inqaku, ngaphandle kokuhla komngcipheko wokutya, i Swiss Franc igcina ezinye zezibheno ezikhuselekileyo.
Amanqanaba enkxaso: 0.9200, 0.9150, 0.9100
I-USDCHF ihlala kumgangatho osezantsi nje we-0.9248, ngokokuhlalutya kobugcisa kwitshathi yemihla ngemihla, kunye nezantsi elilandelayo kwi-0.9221. Nangona esi sibini sinokufumana inkxaso kufutshane ne-0.9200 kwaye kwabonakala ngathi siyekile ukwehla kwaso kwangoko ukusuka kwi-0.9332. Ngenxa yoko, nakuphi na ukunyuka okulandelayo kwinqanaba le-0.9275 ngokuqinisekileyo kuya kujongwa njengethuba lokuthenga.
Ukophulwa okuzinzileyo kwenqanaba lenkxaso le-0.9200, kwelinye icala, kungabonakalisa utshintsho lomkhondo kwaye kutsalele ingqalelo kwinqanaba elibalulekileyo lenkxaso le-0.9150, eliza kuvavanywa. Ukuqhawuka kwenqanaba lokuxhathisa kwangoko kwe-0.9275, kwelinye icala, kufanele ukuba ibe sisalathiso sokuqala sokujika okuguqukayo. Xa kungabikho i-rally entsha, imeko inokujika ibe ye-bearish.
Ekubuyeni kwakhona kwe-0.9200 esezantsi, i-USDCHF ye-intraday bias ihlala imbi ngokuphakathi. Ikhefu lokuthatha isigqibo linokubonisa ukuqala kokuhla okukhulu. Ukuhamba ngaphezulu kwenqanaba lokuchasana elincinci le-0.9275, kwelinye icala, ekuqaleni kunokubuyisa imeko ekhulayo ibe kwindawo yokumelana ne-0.9300 / 9332.
Ukuqwalaselwa kukwinqanaba le-0.9200, elimele inkxaso ephambili. Oku kukhusela inkxaso ye-0.9150, kwaye ukuntywila okungaphantsi kwe-0.9200 kuyadingeka ukwenza indawo yokuhla ngakumbi. Ukuqhubela phambili ixesha elide kunokubangela ukuba kugqitywe ixesha elifutshane kwikota ekufuphi, ivumela i-USDCHF ukuba inyuke iye kwi-0.9300.
← Entsha izithuba1 2 ... 4 abaDala izithuba →